Guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo Muqdisho kula kulmay xubno ka soo jeeda G/Waqooyi, Sawirro:- | Somsoon
Home WARAR Guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo Muqdisho kula kulmay xubno ka soo jeeda...
Guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka oo Muqdisho kula kulmay xubno ka soo jeeda G/Waqooyi, Sawirro:-
Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga Doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka ayaa kulan xarrunta Villa Hargeysa kula qaatay Xildhibaanadda iyo Odayaasha Dhaqanka ee kasoo jeedo Goboladda Waqooyi ee Soomaaliya.
Ujeedka kulanka uu guddiga la yeeshay xildhibaanadda iyo Odayaasha dhaqanka ee kasoo jeedo goboladda Waqooyi ee soomaaliya ayaa ahaa sidii ay aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka Qaranka ay ugu soo bandhigi lahaayeen guddiga.
Xildhibaanadda iyo Odayaasha Dhaqanka ee kasoo jeedo Gobolada Waqooyi ayaa guddiga KMG ah ee soo diyaatinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka usoo bandhigay talooyinkooda iyo aragtidooda ku aadan Sharciga Doorashooyinka Qaranka.
“Marka hore waxa aan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad inaga ogolaateen in aan kulankaan wada yeelanno, marka xigto waxaan idiin kaga mahadnaqaynaa sida aad guddiga aad ugu soo bandhigteen talooyinkiina iyo aragtiyadiina wanaagsan ee la xariiro sharciga doorashooyinka qaranka”waxaa sidaasi yiri gudooomiyaha Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka Xildhibaan C/Laahi Abuukar Xaaji (Eng.Carab).
Tan iyo markii la magacaabay guddigaan waxa uu waday kulamo uu la yeelanaayo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ula wadaagaan aragtiyadooda la xariira sharciga dooorashooyinka Qaranka.
Article horeBooliiska London oo xabsiga dhigay dad diidan isbadalka cimiladda
Article socoda Guddoomiye Mursal iyo dhigiisa Jabuuti oo gaaray Baydhabo